गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण अन्तिम चरणमा, साकार होला दशक पूरानो सपना ? – Health Post Nepal
गेटा मेडिकल कलेजको निर्माण अन्तिम चरणमा, साकार होला दशक पूरानो सपना ?
२०७६ मंसिर २१ गते १५:०१
स्वास्थ्य सेवा र चिकित्साशिक्षाका लागि सुदूरपश्चिमकै बहुप्रतिक्षित गेटा मेकिडकलको भौतिक संरचना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेसँगै एक दशकदेखि प्रतिक्षा गरिएको सुदूर नेपालको यो प्रस्तावित मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनका लागि कानुनी आधार बनाउँन प्रदेश सरकारले समेत तदारुकता थालेको छ ।
शैक्षिक तथा अस्पतालसहित प्रमुख संरचना यसै वर्षभित्र निर्माण पूरा हुने अवस्थामा रहेको गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिका इन्जिर्नियर पवन रावलले बताए । रावतका अनुसार परियोजनाको १० देखि १५ प्रतिशत काम मात्रै बाँकी छ ।
कलेज भवन भने, हस्तान्तरणको अन्तिम तयारी हुँदैछ ।
कलेजका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक भवन, अस्पताल, छात्रावाससहित साना ठूलागरी २७ भन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । अहिले भवनको भित्री भागमा ‘फिनीसिङ’, झ्याल, ढोका लगाउने र छेउछाउमा ट्रेन्च बनाउने काम भइरहेको छ ।गेटा मेडिकल कलेजका लागि हालसम्म साढे तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो वर्ष मात्रै सरकारले १ अर्व २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गुरुयोजनाअनुसारको पूर्वाधार तयार गर्दा ७ अर्व हाराहारीमा खर्च लाग्ने रावलको भनाई छ ।
रकमले पूर्वाधारसँगै अस्पतालका उपकरणलगायत सेवामुलक सामग्रीसमेत खरिदमा खर्च हुनेछ । निर्माण सम्पन्न गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि पढाइ सञ्चालन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ ।तीन तीन सयका शैय्याका गरी दुई वटा अस्पताल, मुख्य प्रशासनीक भवन, कर्मचारी र चिकित्सक अवास, दुई वटा होस्टेलको निर्माण भइरहेको छ । कतिपय संरचनाको सम्झौता यो वर्ष सकिने र केही संरचना निर्माणका लागि अर्को आर्थिक वर्षसम्म सम्झौता अवधि रहेको समितिले जनाएको छ ।
जसमध्ये प्रशासनीक भवनको निर्माण समयमा सक्न कठीन हुने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ ।दश वर्षअघि नै कलेज खोल्ने योजना अगाडि सारिएपनि लामो समयसम्म तोकिएको क्षेत्रका रुख कटानमा वन कार्यालयले अवरोध गरेपछि ढिलाई भएको थियो । अहिले पनि केही मुक्तकमैया बस्दै आएको जग्गा को भोगाधिकारी अझै कलेजको नाममा आइसकेको छैन् ।
पूर्वाधार अन्तिम चरणमा पुगेपनि कलेजका सम्पूर्ण निर्माण सक्ने गुरुयोजनाअनुसार लक्ष्य २०८०/०८१ सम्म छ । पहिलो चरणमा कलेजका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् पूर्वाधार बनाएर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विस्तारै सेवा सुविधा थप्दै जाने सरकारको तयारी छ ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गरेको थियो ।